दाहसंस्कार गरेपछि मृतकमा काेराेना पुष्टि | Hamro Biratnagar
गृह पेज स्वास्थ्य कोरोनभाइरस दाहसंस्कार गरेपछि मृतकमा काेराेना पुष्टि
दाहसंस्कार गरेपछि मृतकमा काेराेना पुष्टि
बुढीगंगा गाउँपालिका–५ माेरङका एक पुरुषको परिवारले अन्तिम संस्कार गरिसकेपछि उनमा कोरोना कोरोना पोजेटिभ रहेको पुष्टि भएको छ । विराट टिचिङ्ग हस्पिटलमा उपचारको क्रममा शुक्रबार राति मृत्यु भएका ४५ वर्षीय पुरुषमा कोरोना देखिएको हो ।
स्वासप्रश्वासमा सामान्य समस्या भएपछि शुक्रबार विहान ४ बजे विराट टिचिङ्ग हस्पिटलमा भर्ना गरिएपछि उनमा निमोनियासमेत देखिएको थियो । बिरामीको स्वास्थ्यावस्था गम्भीर बन्दै गएपछि अस्पतालको आइसीयूमा राखिएपनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको विराट टिचिङ्ग हस्पिटल, कोभिडका फोकल पर्सन डा. पुरु कोइरालाले जानकारी दिए ।
उपचारको क्रममा स्वाब संकलन गरेर परीक्षणको लागि प्रदेश प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै शनिबार विहान १० बजे अस्पतालले आफन्तलाई शव जिम्मा लगाएपछि उनीहरुले बुढीखोलामा लगेर अन्तिम संस्कार गरेका थिए । अन्तिम संस्कार गरेको केही घण्टापछि शनिबार दिउँसो १ः४५ पुरूषको कोरोना पोजेटिभ रहेको रिपोर्ट प्रदेश प्रयोगशालाले दिएको डा. कोइरालाले बताएका छन् ।
संक्रमण पुष्टि भएका मृतकका दाहसंस्कारमा करीब ३ दर्जन बढि मलामी गएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । स्वाब दिएको अवस्थामा कसैको मृत्यु भएमा रिपोर्ट नआएसम्म शव आफन्तलाई दिन नपाइने प्रावधान रहेपनि उक्त मृतककाे दाहसंस्कार नै गरिइसकेकाे छ । कोरोना पोजेटिभ भएकाहरुको शव सुरक्षित रुपमा नेपाली सेनाको टोलीले व्यवस्थापन गर्ने नियम छ ।
अस्पतालको हेलचेक्राइँले मृतकको परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै परिवारले शव लिएर आफैं अन्तिम संस्कार गरेका हुन् । ती पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ रहेको पुष्टि भएसँगै बुढीगंगा गाउँपालिकाले मलामी गएकाहरूको कन्ट्याक ट्रेसिङ गरी सबैको पिसिआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको प्रहरीकाे भनाइ छ ।
अघिल्लो समाचारएकै दिन माेरङमा ४ संक्रमितकाे मृत्यु
अर्को समाचारगत २४ घण्टामा देशभर १०४१ जनामा काेराेना
नेपाल समूहलाई ओलीको आग्रह- अनुचित निर्णय नलिनुस्, समस्या भए बसेर समाधान...